ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » မေတ္တာသည်များအတွက်စိတ်အခြေအနေ၌ထည့်နည်း?
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇူလိုင်. 03 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
သင်နှင့်သင့်ခင်ပွန်းဒါမှမဟုတ်ကောင်လေးကမိတ်ဆွေပဲတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဖြတ်လက်ကိုမစောင့်နိုင်သည့်အခါအချိန်ရှိ၏, သို့သော်ယခုအမှုအရာပြောင်းလဲခဲ့ကြပြီးသင်ခဲလှ၏မေတ္တာကိုအောင်တူခံစား. ဒီသင်လက်ရှိ၌ရှိကြ၏အခြေအနေကိုဆင်တူပါသလား? သင်အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူရှိခဲ့ဖူးသည်သကဲ့သို့သင်တို့အဖြစ်အများကြီးပျော်စရာရှိသည်ကြောင်းသေချာစေရန်, ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်စိတ်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲလေ့လာသင်ယူ.
သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေး၏အစောပိုင်းကာလအတွင်းအများစုကစုံတွဲများ့စုံလင်သောမေတ္တာရာတွင်စိတ်ဓါတ်များ hit ဖို့ပုဂ္ဂလိကထောင့်ရန်လိုအပ်. သို့သော်, ဆက်ဆံရေးအဟောင်းတွေကြီးထွားလာအဖြစ်, ထိုသို့တစ်ချိန်ကအပိုင်အသုံးပြုတဲ့ကျက်သရေဆုံးရှုံးသွားစတင်သည်. ညာဘက်ဝန်းကျင်ထားရှိခြင်းသည်ထိုလူကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာမေတ္တာသည်အကဲသို့ရရှိရန်ကူညီပေးနိုင်တယ်.
သင့်ရဲ့အိပ်ခန်း၏အလင်းအိမ် dimming နှင့်အပေါ်အချို့သောရင်ခုန်စရာဂီတချပြီးကြိုးစားနိုင်ပါ. သင့်အိပ်ရာရှုပ်ပွနေသောမဖြစ်သေချာအောင်လုပ်ပါ; လူအများစုကပဲရှုပ်ထွေးပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ရင်ခုန်စရာမခံစားရနိုင်. နှစ်ဦးစလုံးကြောင့်လက်ငင်း turnoffs နိုင်ပါတယ်ကဲ့သို့သင့်အိပ်ခန်းလွန်းပူပြင်းသို့မဟုတ်အအေးဖြစ်ခွင့်ပြုမထားပါနဲ့. သင်လေအေးပေးစက်သို့မဟုတ်အပူ system install လုပ်ခြင်းရှိပါက, က adjust. ပြတင်းပေါက်များဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်ပိတ်စသင့်အိပ်ခန်း၏အပူချိန်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီဆက်ဆံရေးနွေးထွေးရတဲ့အဘို့အရာအရပ်ကိုပိုမိုသင့်လျော်စေနိုင်သည်.
စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချ of sex drive လိင်စိတ်အများဆုံးအကြောင်းတရားများတစ်ခုဖြစ်တယ်. မကြာသေးမီကရရှိခဲ့စာရင်းဇယားများ ပတ်ဝန်းကျင်ထုတ်ဖေါ် 15% ယောက်ျားအဓိကအားဖြင့်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့အသက်တာ၌ရှိသည်စိတ်ဖိစီးမှု၏အနိမ့်လိင်စိတ်ရှိသည်. testosterone အမျိုးသားများတွင်လိင်ဆက်ဆံမှု drive ကိုထိန်းချုပ်သောဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်. လူတအဟောင်းတွေကြီးထွားလာအဖြစ် (30 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို), မိမိအဟော်မုန်း testosterone level ကိုဆင်းလာမယ့်စတင်သည်; စိတ်ဖိစီးမှု Cortisol တို့၏ထုတ်လုပ်မှု triggers နဲ့ပင်နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ဟော်မုန်း testosterone level ကိုလျော့ကျ. ဒါကြောင့်, စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်နှောင့်အယှက်ယောက်ျားသည်အများအားဖြင့်သူ့ခေတ်အခါကအခြားလူထက်နိမ့်လိင်စိတ်ရှိပါတယ်.
သင်သည်မီးပွားဆောင်ခဲ့ပြန်အဖြစ်အလိုအလျောက်ပြန်နှစ်အနည်းငယ်ပြုပါရန်အသုံးပြုကဲ့သို့ချစ်ခြင်းများအတွက်စိတ်ဓါတ်များရချင်တယ်လိုလျှင်, သင်နဲ့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ရင်ဆိုင်နေရသောသည်စိတ်ဖိစီးမှုသတ်ပစ်ရန်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေကြရနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာကိုယ့်ကိုကိုယ့် De-အလေးပေးလိမ့်မယ်. အကောင်းဆုံးကတော့, သင်ကစိတ်ဖိစီးမှုရိုက်နှက်မှုကြောင့်အတူတကွ၏ခံစားချက် reinstating အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအကူအညီပေးသင့်. မျက်နှာသာကိုပြန်သွားဖို့ကိုသူ့ကိုမေးပြီးတော့သူ့ကိုနှိပ်နယ်ပေးပါနှင့်, အတူတကွပူပြင်းတဲ့ရေချိုးခန်းယူ, အတူတူညစာပြင်ဆင်မည်, ညစာစားအပြီးဥယျာဉ်ထဲမှာလမ်းလျှောက်သွား; ဤအရာအလုံးစုံတို့သည်စုံလင်သောမေတ္တာရာတွင်စိတ်ဓါတ်များအတွက် unwind နှင့်ရရန်သင်နှင့်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုကူညီလိမ့်မယ်.
သင် Sexy ဖြစ်ခံစားရကြောင်းသေချာပါစေ
မေတ္တာကိုဖြစ်စေတူခံစားရရန်, သင်ပထမဦးဆုံး Sexy ဖြစ်ခံစားရမယ်. သင်တို့သည်လမ်း၌အ ပတ်သက်. ယုံကြည်စိတ်ချမှုမဟုတ်ခဲ့လျှင်သင်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းရရှိခဲ့အလေးချိန်ကြောင့်ကြည့်ရှု, အားကစားခန်းမသို့ရောက်ရန်ကြိုးစားကြောင့်တချို့ဆုံးရှုံး. ဒါဟာသင်ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချသွားပါလိမ့်မယ်နောက်တဖန်သင်တို့ကို sexy ခံစားနေရတယ်စတင်ပါလိမ့်မည်. သင်တို့သည်လည်းအသစ်သောခံထွက်ကြိုးစားနိုင်ပါ, ဒါပေမယ့်သင်ကအတွက်အဆင်ပြေဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ; နှစ်သိမ့် sexy ခံစားနေရတယ်အတွက်လည်းအလွန်အမင်းအရေးကြီးပါတယ်ဤအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်.
ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်စိတ်ရ, သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးကနေပျင်းဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်ဟုအကျင့်တို့ကိုကျင့်ရမယ်. သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်, သင်ကခက်ခဲမေတ္တာကိုဖြစ်စေခြင်းငှါစိတ်ကို၏ညာဘက်ဘောင်ရရန်ရှာဖွေမည်မဟုတ်.